Sida Loo Isku Dheelitiri Karo Qaadashada iyo Dadaalka Haynta | Martech Zone
Sida Loo Isku Dheelitiri Karo Qaadashada iyo Dadaallada Haynta
Markaad isku dayeyso inaad hesho macmiil cusub, waxaan runtii aaminsanahay in caqabadda ugu weyn ee ay tahay inaad ka gudubto ay tahay kalsooni. Macaamilku wuxuu doonayaa inuu dareemo inaad la kulmi doonto ama ka badnaan doonto waxyaabaha laga filayo badeecadaada ama adeeggaaga. Waqtiyada adag ee dhaqaalaha, tani xitaa waxay noqon kartaa wax badan maadaama rajadu xoogaa laga ilaaliyo lacagaha ay doonayaan inay ku bixiyaan. Sababtaas awgeed, waxaad u baahan kartaa inaad hagaajiso dadaalka suuqgeynta si aad ugu tiirsanaato macaamiishaada jira.
Haysashada ma noqon karto istiraatiijiyad dhan, iyada oo loo marayo. Haysashadu waxay u samaysaa shirkad faa'iido leh oo macnaheedu yahay inaad ku guuleysatay inaad qiimo u siiso macaamiishaada. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan macaamiil cusub u helin si joogto ah, waxaa jira waxyaabo xun:
Macaamiishaada muhiimka ahi waxay kaa tagi karaan nugul haddii ay baxaan.
Kooxdaada iibka waxaa laga yaabaa inaysan firfircooneyn isku dayga ah inay xirto kana baxdo tababarka.
Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad si weyn u kobciso meheraddaada.
Xogtan oo ah Xogta Koowaad, waxay ku siinayaan qaar ka mid ah tirakoobka, xeeladaha, iyo tabaha la xiriira labadaba istaraatiijiyadaha helitaanka iyo haynta. Inta ugu fiican oo dhan, waxay bixiyaan hagitaan ku saabsan isku dheelitirka suuqgeyntaada iyo dadaalka iibinta ee u dhexeeya labada istiraatiijiyadood.
Qaadashada iyo Istaatistikada
Waxaa lagu qiyaasaa in ku dhow 40% dakhliga ganacsiga e-commerce wuxuu ka yimaadaa celiyaan macaamiisha.
Ganacsiyada waxay leeyihiin a 60 ilaa 70% fursad iibinta ah hadda jira macmiil marka loo eego 20% fursad for a cusub macmiil.
Sida laga soo xigtay khubarada qaar, ganacsi si fiican u dhisan waa inuu xoogga saaraa 60% ilaha suuqgeynta haynta macaamiisha. Ganacsiyo cusub Dabcan, waa inuu waqtigooda ugu badan geliyaa sidii ay ku heli lahaayeen.
Isu dheellitirka Qaadashada iyo Haysashada
Dadaalladaada suuq-geynta ayaa go'aamin kara sida ugu wanaagsan ee aad u hesho ama u haysato macaamiisha. Waxaa jira shan istaraatiijiyadood oo muhiim ah oo loo adeegsado labadaba:
Xoog saar tayada - Soo jiidan macaamiil cusub kuna dhiirrigeli kuwa hadda jira inay la joogaan adeegyo iyo alaabooyin gaar ah.
La Shaqee Macaamiisha Hadda - ka dhig macmiilkaaga jira inuu dareemo inaad qiimo leedahay adoo ka codsanaya inay ku faafiyaan warka kugu saabsan dib u eegista khadka tooska ah.
Qabso Suuqgeynta Internetka - Adeegso warbaahinta bulshada si aad ula xiriirto macaamiisha cusub iyo suuqgeynta iimaylka diirada saaraya si aad ula xiriirto kuwa jira.
Qiimee Saldhigga Macaamiishaada - dhexgal xogtaada si aad u ogaato mid ka mid ah macaamiishaada hadda jira oo runtii mudan in la hayo iyo kuwa aan ahayn.
Shaqsi hel - U dir macaamil jira qoraalo gacmeed si ay ugu sameeyaan suuqgeyn wax ku ool ah oo gacan ka geysata dhisidda ereyga afka oo adag.
Ku saabsan Xogta Koowaad
First Data waa hogaamiye caalami ah xagga lacagaha iyo tikniyoolajiyadda maaliyadeed, oo u adeegta kumanaan hay’ado maaliyadeed iyo malaayiin ganacsato iyo ganacsiyo ka kala jira in ka badan 100 waddan.